A tọhapụrụ Stable Android Pie maka OnePlus 3 na 3T | Androidsis
Akwụsịrị ike achịcha akwụrụ ụgwọ maka OnePlus 3 na 3T
Ozi ọma maka ndị ọrụ nke OnePlus 3 na 3T: Companylọ ọrụ ahụ ewepụtala ụdị kwụsiri ike nke A gam akporo maka ngwaọrụ ndị a n'ikpeazụ!
Ma ọ bụ site na mwepụta nke ọkọlọtọ ọhụrụ ya, nke bụ OnePlus 7 na 7 Pro, ọ bịara doo anya na onye nrụpụta China anaghị echefu ụdị ihe ochie ya, yana nke ahụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị otu n'ime. nke kachasị enye mmelite, ọ na -achọ ya.
Mmelite ahụ, kedu ka ọ ga -esi dị iche, abịa n'okpuru OxygenOS. Na nkọwapụta, ụdị nke nhazi nhazi a na -aghọ 9.0.2 yana ọ gụnyere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, ndozi na ndozi.
Otú ọ dị, naanị ndị ọrụ ole na ole ga -enwe ike ịnata ya taa, mana mgbe e mesịrị, a ga -agbatị ọnụ ọgụgụ ahụ ruo mgbe ndị ọrụ OnePlus 3 na 3T niile nwetara ya n'ikpeazụ. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ kọrọ na iji VPN dị iche ma ọ bụ ụzọ ọ bụla ọzọ agaghị enyere aka nweta mmelite ngwa ngwa. Yabụ, naanị ihe fọdụrụ bụ ichere ka ịnata firmware ọhụrụ na ekwentị n'ụzọ ọrụ na mgbe niile, na -enweghị ụzọ mkpirisi, ebe ọ nweghị.
Ndị a bụ mgbanwe gam akporo Pie n'okpuru OxygenOS 9.0.2 na -eweta maka OnePlus 3 na 3T:
2 Ekwekwala ọnọdụ
3 Gamedị egwuregwu ọhụụ 3.0
Emelitere sistemụ na gam akporo 9 Pie.
Ngwa ọrụ ọhụrụ maka gam akporo Pie.
Nwelite patch nche gam akporo ruo 2019.4 (nke dabara n'ọnwa Eprel).
General bug fixes na ndozi.
Ị nwere ike ịhazi oge oge n'ime ụdị nsogbu ọ bụla.
Gamedị egwuregwu ọhụụ 3.0
Na -akwado ọdịnaya ederede nke ọkwa welie isi elu.
Agbakwunyere amamọkwa maka oku ndị ọzọ.
Bookmark na -akwado Google Duo ugbu a.
Na -akwado Google Lens iji nye gị ahụmịhe onyonyo siri ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Akwụsịrị ike achịcha akwụrụ ụgwọ maka OnePlus 3 na 3T
"Naanị ihe fọdụrụ bụ ichere ịnata firmware ọhụrụ na ekwentị n'ụzọ gọọmentị na oge niile, na-enweghị ụzọ mkpirisi, n'ihi na ọ nweghị."
Ị na-ezighị ezi, ọ bụrụ na e nwere. Naanị ị ga-etinye nkwalite oxygen na ụlọ ahịa play na site na nbudata mmelite zuru oke, ọ bụghị mmụba, mezue ma wụnye ya na nhọrọ ekwentị nwere, ọ ga-akpọ nkwalite mpaghara nke dị na "mmelite" na ọ bụ ya. Ọ bụrụ na ị nwere ekwentị ngwaahịa ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ịmeghe ya ma ọ bụ ụfọdụ rom ma ọ bụ ihe adịlarị mgbagwoju anya.
Mmelite oxygen bụ nke ochie ndị ọrụ otuplus maara na a na -ebudata rom site na sava ndị ọrụ otuplus ma ọ ka na -adịkwa n'emeghị ihe ọ bụla anyị maara na hash.
Ya mere, i meela ozi ọma ndị a, "melite Op3 / 3t gị na android 9 stable official 1 link Mega no fake 100% real crack incl."
A na-ehichapụ ihe oyiyi na vidiyo mbụ nke Mario Kart Tour maka ekwentị mkpanaaka
Achọpụtara igwefoto atọ nke Redmi K20 ma kwado ya na onyonyo ọhụụ ya